Naghachi Data si iCloud ndabere File - Wondershare Dr.Fone
Naghachi Data si iCloud ndabere: Olee otú Iji
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS, họrọ mgbake mode nke "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" n'elu. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru. Tinye iCloud akaụntụ na paswọọdụ nbanye. Wondeshare ewe nzuzo gị kpọrọ ihe. Ọ dịghị mgbe anyị na-a ndekọ nke ọ bụla gị Apple akaụntụ Ama ma ọ bụ ọdịnaya n'oge ọ bụla gị sessions.
Mgbe ị na-ite n'ime iCloud, usoro ihe omume nwere ike ịhụ niile iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ onye na ebe ị na-aga na-agbake data na pịa na "Download" bọtịnụ.
Na mgbe ahụ na mmapụta, ị nwere ike họrọ ụdị nke faịlụ ị ga-achọ ka download. Nke a ga-ebelata oge nke nbudata iCloud ndabere faịlụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iṅomi iCloud ọdịnaya ugbu a. Pịa na "iṅomi" button na-amalite. Ọ ga-ewe gị oge ụfọdụ. Nnọọ echere maka oge.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake Data si iCloud ndabere File
Doppler ga-ezu na a nkeji ole na ole. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị nwere ike ihuchalu fọrọ nke nta niile data gị iCloud ndabere faịlụ, dị ka ozi kọntaktsị, foto, na ọzọ. Lelee ha otu otu na nne Mmetụta ihe ị chọrọ. Wee pịa na "Naghachi button" na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Ọzọ: Nzọụkwụ ịrụzi iOS Sistem